Wararka Maanta: Arbaco, Sept 5 , 2018-Al-shabaab oo xiray in ka badan 60 oday dhaqameed
Arbaco, September, 05, 2018 (HOL) – Wararka ka imanaya gobollada dhexe Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Galguduud ayaa sheegaya in Al-shabaab qafaasheen in ka badan 60 odey dhaqameed.
Wararku waxaa ay sheegayaan in odayaashan ay xireen Al-shabaab in loo heysto bixinta diyo loo heysto dad ehel yihiin, diyada loo haystay odeyaasha ayaa gaaraysa 100 halaad islamarkaasna waxaa lagu ballamay in sannad kasta ay bixiyaan diyada hal qof.
Wararku waxay sheegayaan in sannadkani ay odeyaasha ka cago jiideen dhamaystirka bixinta diyadaasi.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa sheegay in ku dhawaad 70 oday ay Shabaab afduubteen islamarkaana ay la aadeen degmada Ceelbuur oo ay ku sugan yihiin Shabaab.
Al-shabaab wali kama aysan hadal odayaashan la sheegay in ay ka qafaasheen deegaannada gobollada dhexe, gaar ahaan gobolka Galguduud.